#कोरोना संक्रमण पुष्टी
सगरमाथाको चुचुरोमा चिनियाँ सर्वेक्षकको टोली सन् २००५ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार चीनले सगरमाथाको उचाइ ८८४४/४३ मिटर रहेको बताउँदै आएको छ ।
नेपाली पब्लिक बिहीबार, जेठ १५, २०७७
चिनियाँ सर्वेक्षकहरूको एक टोलीले बुधबार विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१) को महामारी सुरु भएयता सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको यो पहिलो टोली हो। चिनियाँ सञ्चार माध्यमका अनुसार उचाइ पुनस् मापन गर्नका लागि टोलीले सगरमाथाको आरोहण गरेको हो।
भाइरसको महामारीका कारण नेपाल र चीनको सीमामा पर्ने सगरमाथाको आरोहण गर्न दुवै देशले विदेशी टोलीलाई रोक लगाएका छन्। चीनले भने आफ्ना नागरिकलाई आरोहणको अनुमति दिँदै आएको छ। चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्हवाले सर्वेक्षकको टोलीले सगरमाथा आरोहण गरेको जनाएको छ। ‘दुई जना व्यावसायिक सर्वेक्षकले मौसमको अनिश्चितता र अपर्याप्त अक्सिजनका कारण आरोहण बीचमै रोकेका छन्,’ सिन्हवाले उल्लेख गरेको छ।
सिन्हवाका अनुसार ८ जना आरोहीहरू स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान ११ बजे सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेका हुन्। ‘सहयोगीहरूले मंगलबार टाँगेको डोरीको सहयोगमा टोलीका सदस्यहरू चुचुरोमा पुग्न सफल भएका हुन्,’ सिन्हवाले जनाएको छ। टोलीमा सिन्हवा समाचार संस्थाका विशेष संवाददाता टासी छिरिङसमेत छन्। चिनियाँ टेलिभिजनमा सार्वजनिक दृश्यहरूमा उनीहरूले सर्वेक्षणका लागि आवश्यक उपकरणसमेत जडान गरेको देख्न सकिन्छ।
सिन्हवाले आइतबार १२ सदस्यीय टोली ७०२८ मिटरको क्याम्पमा पुगेको जनाएको थियो। यसअघि खराब मौसमका कारण चुचुरोमा पुग्ने उक्त टोलीको प्रयास दुई पटकसम्म असफल भएको थियो। चीनको राष्ट्रिय स्रोत मन्त्रालयका अनुसार गत मार्च महिनाको सुरुदेखि ५३ सदस्यीय टोलीले सगरमाथाबारे वैज्ञानिक कार्यहरू गरिरहेको छ। सगरमाथाको उचाइबारे नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन ‘बेइडो’ नामक भू–उपग्रह प्रयोग गरिएको सिन्हवाले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हिउँको गहिराइ, मौसम र हावाको बहावबारे समेत टोलीले अध्ययन गर्नेछ।
चीनले सगरमाथाको उचाइ नेपालले कायम गरेको भन्दा करिब ४ मिटर कम रहेको बताउँदै आएको छ। तर ५ वर्षअघि नेपालमा गएको ठूलो भूकम्पपछि यसको उचाइमा सामान्य परिवर्तन आएको हुन सक्ने ठानिएको छ। चीनले सन् १९४९ यता ६ पटक सगरमाथाको सर्वेक्षण गरिसकेको छ। सन् १९७५ को सर्वेक्षणअनुसार चीनले सगरमाथाको ८८४८/१३ मिटर रहेको जनाउँदै आएको थियो।
तर सन् २००५ मा चीनले यसको उचाइ ८८४४/४३ मिटर कायम गरेको हो। नेपालले यसको उचाइ ८८४८ मिटर कायम गर्दै आएको छ।आरोहण क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्नु निकै कठिन मानिन्छ।हिमाण आरोहणसम्बन्धी तथ्यांक राख्ने संस्था हिमालयन डाटाबेसका रिचार्ड सालिसबरीका अनुसार सन् १९६० को मे महिनामा चिनियाँ टोलीले सगरमाथाको आरोहण गरेको थियो।
त्यसै वर्ष भारतीय आरोहीहरूले प्रयास गरे पनि उनीहरू असफल भएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत अक्टोबरमा भएको नेपालको राजकीय भ्रमणका क्रममा दुवै देशले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो। राष्ट्रपति सीले सगरमाथालाई ‘दुवै देशको मित्रताको अनन्त प्रतीक’ बताएका थिए। यो समाचार आजको काँन्तीपुर दैनीकमा छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७ ०१:०४
शनिबार, भदौ १३, २०७७ २०:१२ ‘जनता जान्न चहान्छन्’मा प्रधानमन्त्री केपी ओली, ऋषि धमला शालिन (हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ता)
दशैंको बिम्ब चंगा अर्थात् भुतुमाली, धान, नीलो आकाश र इन्द्रदेव
यसपालिको आशिष: टाढै बसेस् ! कोर्नाले साँचे धेरै बाँचेस् !
प्रहरी हत्यामा संलग्न सात जना पक्राउ
रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलको उद्घाटन गरिँदै